KaOS 2020.02 tonga tany amin'ny Plasma 5.18 LTS, Linux 5.5 ary bebe kokoa | Avy amin'ny Linux
ny mpamorona ny fizarana Linux KaOS, nanambara omaly ny fanombohana ny ny fizarana vaovao marin-toerana vaovao amin'ny faran'ny fizarana, izay manolotra ny sary namboarina vaovao "KaOS 2020.02”Izay heverin'ireo mpamorona fa nanomboka ny taona 2014 dia mbola tsy naseho ny sary misy fampiasa vaovao marobe.
Ho an'ireo mpifidy izay mbola tsy mahalala ny fizarana dia azoko lazaina aminao izany fizarana ity Linux irery, nifantoka manokana tamin'ny tetik'asa KDE, zavatra mitovy amin'ny an'ny KDE Neon (fizarana miorina amin'ny Ubuntu). aza KaOS dia fizarana namboarina avy tany am-boalohany miaraka amin'ireo tahiry ao aminy.
Amin'ny maha distro azy manokana, dia mampiasa tontolon'ny birao KDE Plasma ho an'ny fampisehoana tsaratsara kokoa, ampiasaina ny tranomboky Qt, izay tsy mifanaraka amin'ny hafa amin'ny karazany.2
1 Inona no vaovao ao amin'ny KaOS 2020.02?
2 Sintomy ary apetraho KaOS 2020.02
Inona no vaovao ao amin'ny KaOS 2020.02?
Miaraka amin'ny famoronana an'ity sary vaovao an'ny KaOS ity, ankoatry ny fanampiana ireo mpampiasa hisoroka ny fisintomana fanavaozana be dia be dia be ihany koa Voalaza fa nisy fanatsarana natao momba ny installer sy ny fonosana rafitra.
Voalaza ao izany ankehitriny avy amin'ny installer fizarana dia azo atao ny misafidy ny efitrano birao tianao na raha tsy ampiasaina io dia afaka misafidy ny tsy hametraka iray ny mpampiasa, amin'izay dia hanamaivana bebe kokoa ny lanjan'ny rafitra. Voalaza ihany koa fa nisy fanovana kely natao tamin'ny rindranasa Welcome.
Ary miresaka momba ny fonosana rafitra, ao amin'ny Sambo KaOS 2020.02 miaraka amin'ny tontolon'ny birao KDE Plasma 5.18 LTS, miaraka amin'ny izay misy ny rindrambaiko KDE farany rehetra, ary koa ny fomba Fanavaozana sy fanavaozana ny Plasma 5.18.1 izay natomboka ho an'ny Fampiharana KDE amin'ity volana ity, ary koa ny Framework Frames 5.67.0.
Etsy ankilany dia hitantsika fa ho an'ny fon'ity rafitra ity, Linux Kernel 5.5 tafiditra ao, na dia efa misy aza ny kernel Linux 5.5.6 ao amin'ny trano fitahirizam-bokatra hahafahana manavao izany ary miaraka amin'izany ny fanohanan'ny fitaovana ho an'ny fitaovana vaovao dia tokony hohatsaraina kokoa.
Amin'ny lafiny fisehoana dia natao indray ny lohahevitra Midna ary ny fiovana lehibe indrindra dia ny fiovana avy amin'ny QtCurve mankany Kvantum ho an'ny fomban'ny fampiharana. Ksplash dia notsorina tamin'ny sary mihetsika vitsy kokoa, ny lohahevitra SDDM dia misy mifanohitra tsara kokoa.
Ny lohahevitra ho an'ny systemd-bootloader dia vaovao tanteraka, nesorina ny fototra mainty misy soratra fotsy, fa ho hitanao ny safidy tafiditra tsara amin'ny ambin'ny lohahevitra Midna, miampy grub bootloader dia nohavaozina hanaraka fijery mitovy amin'ny systemd-bootloader.
Ary farany, ny singa hafa nohavaozina dia: ALSA 1.2.2, systemd 244 init, Tabilao 19.3.4, GNU nano 4.8, NetworkManager 1.22.8 mpitantana ny tambajotra, Pacman 5.2.1 mpitantana fonosana, X.Org Server Display Server 1.20.7 ary Sudo 1.8.31, nasiana tampoka fahalemena farany farany
Raha te hahafantatra bebe kokoa momba izany ianao momba ny fanovana sy ny fiasa nampidirina tamin'ity famoahana vaovao ity dia afaka mianatra momba azy tsirairay amin'ny antsipiriany ianao Ao amin'ity rohy manaraka ity.
Sintomy ary apetraho KaOS 2020.02
Raha te hanandrana an'ity kinova vaovao an'ny rafitra ity ianao hizaha toetra azy amin'ny milina virtoaly na apetrakao amin'ny solo-sainanao aza dia afaka mankany amin'ny tranonkala ofisialin'ny tetikasa ianao ary ao amin'ny fizarana fampidinana anao dia azonao atao ny mahazo ny sarin'ity kinova vaovao ity, ny rohy dia ity. Ny sary fizarana dia azo soratana miaraka amin'i Etcher amin'ny fitaovana USB.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » KaOS 2020.02 tonga Plasma 5.18 LTS, Linux 5.5 ary maro hafa
Ktulu dia hoy izy:
Okay, mangina izahay. Aza apetraka
Valiny amin'i Ktulu